Odayo Dhaqan mise Odayo Dhibaad?! – Bashiir M. Xersi
Alla Dhaqanguurka ka dhacay baaxad weynaa, haddii dhallinta dhalanrog lagu dhaliilay, haddii da’yartadammanaan lagu daabacay, Odoyo dhaqameed dhaqan oday iyo dhaqan Dhaqan laga hayn, maxaa lagu dhigaa?.
Maalintii labaad ee shirka gabar magaceedu yahay Caasha Kiin, kana mid ah Guddiga Dastuurka, eeQandhada Qabyo qoraalka noo soo qoray, oo anigu aanan bar garanayn, Bah garanayn, Berrinna garanayn, ayaa hadal ka jeedisay kulankii, intii ay hadalka wadday ayaa waxaa si kadis iyo lama filaan ah ugu soo fakaday Naynaasta caanka uu ku yahay Sharif Sh. Xasan Sheikh Adan, ee ah “Shariif Sakiin” ka dib wixii dhacay waaba la ogaa.
Gabadhu inta kol ee ay tiri, waan ka cudurdaranayaaa, raalli ka ahaada, lama tirin karo, haddana, dhag iyo dhug midna looma yeelan, haddii xaal sidaa yahay, ayaa waxaa shirka isaga baxay Odoyo ay iskuabtirsiimo yihiin Sharif Sh. Xasan Sheikh Adan, kuna dooday in wax loo dhibay Siyaasi beesha u dhashay, shirkiina sidaa hakad ku galay, dood dheer ka dib, waxaa Odoyadii carooday lagu xaalmarshayKun Dollar, Koofi iyo Kitaab Quraana! Alla Kitaabow maxaa lagugu takri falay!
Aanse in yar gabadha u doodo anoon garanayn, isku goof ama gobolna ahayn ogaalkaygee, waxaa lagu celceliyey in qaladku ka dhacay gabar, iyadoo waliba la adeegsaday eraga Carabiga ah ee “Nisa” run ahaan qaabkaa wax loo sawiray, wuxuu muujinayaa in gabadha iyo dumarkoo dhanba goobtaa laguliiday, iyadoo laga dhigay hadduu goobtaa nin ka hadli lahaa inaan qaladkaa dhici lahayn, waaba iga su’aale, dumarku ma ragga ayey ka caqli liitaan? Saw hore looma oran: “Hafyo hadal kuma jirto” iyo “Nin Habari dhashay hal ma seegi waayo”.
Inta burburka lagu jirayna aan eego, madaxweynihii Dalwaddii Carta, C/qaasim Salaad Xasan Naynaastiisu waxay ahayd “Cabdi Gaajo” Cabdi Cawaale Qaybdiid, isna waa “”Khayr diid” Maxamed Qanyare Afrax, isna waa “Han yare” Maxamed Faarax Caydiid madaxa dawladdii Salbarraar, isna waa “ Car i diid” Cali Mahdi MAxamed Madaxweynihii Dawladdii Manifesto, asna waa “Cali Naafto” C/laahi Yuusuf Axmedmadaxweynihii dawladdii Empagath, isna waa “Ma quuste” Ilma Faroole iyaga waxaa la yiraa: “Ilma Saddam”
Weydiimahan kuma socdaan oo kaliya odoyada shirka isaga baxay, ee waxay ku socdaan dhammaan intaOday Dhaqameed sheegata, gaar ahaan kuwooda ku shirsan Muqdisho, oo looga fadhiya inay aayaha umaddan toosiyaan, sidaa awgeed, waxaan ku soo afjaraya erayadan uu tiriyey Cabdiraxiim Hilowle Galayr, ee ah sidan:
Previous Previous post: Anna Musharrax baan ahay!
Next Next post: Foolal cusub iyo Faro caddaana